Budata Pure Farming 2018 maka Windows
Budata Pure Farming 2018
Budata Pure Farming 2018,
Ọrụ Ugbo dị ọcha 2018 bụ egwuregwu ịme anwansị ọhụrụ nke Techland, nke anyị maara nke ọma na mmepụta ya nke ọma dị ka ịnwụ anwụ.
Pure Farming 2018, ihe ngosi ugbo na ogo nwere ike iru egwuregwu Farming Simulator, na -agwakọta ogo eserese dị elu na sistemụ egwuregwu dị adị. Negwuregwu ahụ, ị ​​nwere ike iji ezigbo ụgbọ ala nwere ikikere ejiri rụọ ọrụ ugbo ọgbara ọhụrụ, ị nwekwara ike iwe ihe ubi site na ịkụ ngwaahịa akọwapụtara mpaghara na ihu igwe na Europe, North na South America na Asia.
Enwere ụdị egwuregwu atọ dị iche iche na Pure Farming 2018. Moddị egwuregwu a na -amasị ma ndị egwuregwu egwuregwu egwuregwu simulation na ndị mbido na egwuregwu ịme anwansị.
Nime Pure Farming 2018, ndị egwuregwu nwere ike isonye na mmepụta nke ngwaahịa ugbo na ọrụ anụ ụlọ. Ị nwere ike jiri ezigbo ụgbọ ala nke ezigbo ụdị rụọ ọrụ, yana gbakọọ ezi physics nọhịa, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọba na ngalaba ugbo ndị ọzọ.
Ogo eserese nke Pure Farming 2018 dị elu nke ukwuu. Edepụtara obere usoro chọrọ egwuregwu a dị ka ndị a:
- sistemụ arụmọrụ 64-bit (Windows 7 na karịa)
- Nvidia GeForce GTX 560 kaadị eserese nwere ebe nchekwa vidiyo 2GB
- 12 GB nke nchekwa efu
Pure Farming 2018 Ụdịdị